Fluffy, izigaxa ngokuthinta ... yozalo, abaningi balinde nge ukuntula isineke esikhulu, kodwa kudingeka wazi ukuthi ukukhulelwa nokubeletha - umzuzwana kubaluleke kakhulu emphilweni hhayi kuphela isilwane, kodwa futhi zaziziningi. Qiniseka ukulungiselela: kusengaphambili, ukubala, bangaki cat uzala lokhu sikhathi esibucayi kwakungelona ukumangala ngawe.
Ngokuvamile kulula, futhi cishe kungabonakali. Not sikhohlwe, ngokushesha ukwenza izibalo ezilula. Ngakho-ke ngeke njalo ukwazi ukuthi zingaki ikati sizala. Wanakekelwa ekhaya Murka amazinyane eside. Kusukela ngesikhathi sokuhlala kwesisu bekufike isikhathi sokubeletha kuthatha amasonto mayelana 9. Idethi ngqo odinga ukukwazi ukulungiselela sokubelethisa. Nakuba esimweni ikati okuqukethwe khulula lokhu akwenzeki ngaso sonke isikhathi. Ngokuvamile odokotela bezilwane ukuphakamisa usebenzisa le ndlela elandelayo. Kuze kube manje matings ungeze izinsuku ezimbili futhi izinyanga ezimbili ezigcwele. Ukwazi ukuthi bangaki ikati uyabeletha, kungenzeka ukuba uqaphela kwezinso futhi bafune iseluleko wezokwelapha.
izinguquko bokuphila e amakati omzimba
Ngokuvamile ziba olubonakalayo nesonto lesithathu, okungukuthi, cishe 21 izinsuku emva kokuzalela. Kuyinto lesi sikhathi kubalulekile Ihlahlubo ukulungiswa isikhathi. Qala redden futhi azihlanganise kuze efihlekile, zingabantu oyindilinga nesiphakanyisiwe. Esiswini iba ayazika futhi okuqinile, emhlabeni izingono livela uyaxebuka ensundu. Cat iba bayozela, enendawo iphango omuhle. Uma ubona lezi zimpawu, siyasibona kakade uqinisekise idethi kanye ukuthola ukuthi zingaki ngokuthe ngqó ikati sizala.
Isizathu ngoba isikhalo ophuthumayo vet
Ezimweni eziningi, amakati abakhulelwe iqhubeke ngaphandle kwezihibe, futhi ngesikhathi esimisiwe unomkhaya encane ubuka. Kodwa ngezinye izikhathi zikhona izinkinga ezingase zivele esingalindelekile, yingakho kubalulekile ukwazi ukuthi zingaki izinyanga uzozala ikati. Uma i-pre-esabekwa usuku isidlulile, nomshikashika ingekho, kuba isizathu sokukhathazeka. Kubaluleke ngokukhethekile ukuba ulibale, uma ozithandayo Fluffy njalo ngifuna indawo meows okulusizi, uyenqaba ukudla isikhathi eside. Lokhu kuziphatha evamile e inqubo abelethe, kodwa uma ubona ukuthi bekulokhu amahora angaphezu kuka-10 futhi amazinyane awaveli ke kunesidingo esiphuthumayo uzowenza aze Vết.
Ezinye izimpawu I-ukwelashwa ngokushesha kudokotela kungaba ikati ukucobeka, ukuhlanza, ukukhishwa yisisu esindayo iphunga oluphuma esithweni sangasese, nokuquleka. Musa ukudonsa, ngoba kuthinta impilo isilwane sakho.
womama izindawo Ukulungiselela
Uma ucabangela, ukuthi izinyanga eziningi uzozala ikati, ungakwazi phambili ukulungiselela mini-esibhedlela. Njengoba kungase kube ibhokisi elincane nge imigodi umoya, ivaliwe, ukubopha nezingubo zokulala ezithambile. Mayelana usuku ngaphambi kokubeletha cat iqala ukubheka isidleke ethokomele, ungakhathazeki, futhi udinga uthando nokunakwa kabili. I izindawo eziyizintandokazi kakhulu kuzalwa amazinyane kukhona zokugqoka nelineni, kufanale agqoke izikhindi zangaphansi, nge izingubo ezifudumele. Okubaluleke kakhulu, le ndawo ethokomele futhi unuka umnikazi, Ideal - embhedeni, ngakho-ke ngokuvamile abanikazi uvuke ekuseni kanye wonke umndeni. Ngisho ngemva kokubeletha kwenye indawo, ikati ivame ukuthi akasondele eduze izinsana womuntu. Ukuze ugweme lokhu, ukulungiselela kusengaphambili ibhokisi. Zilungiselele ukuthi uma ikati uzizwa Kufinyeta kuqala, kuyoba abazama ukuba ethangeni lakho, ngakho omunye akafuni ukuba ahlale ebhokisini lakhe. Ngaphambi kokuzalwa lekati wokuqala kungcono ukuhlala nge pitomitsy yakhe, pat futhi baduduze wakhe. Uma lokuzalwa kuyokwenzeka ebusuku, wena engozini wake up kusukela izingane Uyaqina embhedeni wakho.
Kakhulu okusikhumbuza ukukhulelwa komuntu, ngoba sonke - ezincelisayo, nezinto eziphilayo ukusebenza ayefana kakhulu. Okuwukuphela umehluko okukhulu - ubude besikhathi. Zingaki izinsuku ubeletha ikati? Ngokuvamile kokukhula kwayo ngemva kokukhulelwa isifika izinsuku 59-66, ngakho ulinde izingane uzoba isikhashana. Chaza ngokunembile kunzima kakhulu, njengoba kukhwelana e amakati iqala eside ngaphambi ukukhiqizwa kwamaqanda futhi ihlala isikhathi esithile ngemva kokukhulelwa. ngeziphambeko ezingenzeka. Ezimweni ezingavamile, ukukhulelwa kuphazamisa ukuqeda kwesikhathi, kodwa kulokhu, kittens kuyoba iphila. Uma ukukhulelwa kungapheli, kulapho ngakho umnikazi udinga ukwazi ukuthi zingaki izinsuku cat sizala. Uma sokukhulelwa nokunwetshiwe - isizathu yokudluliselwa esiphuthumayo wezilwane. Ubuningi ikati amazinyane abagqoka izinsuku ezingu-66.
Ukukhulelwa ikati amasonto
Bonke abanikazi sikuthanda kakhulu zingaki izinsuku uzozala ikati. Manje cabanga lonke inqubo sokukhulelwa, kungcono ukuthi wacabanga. Luqala ngokunikela akhulelwe ophumayo umbungu esibelethweni. Nakuba izimpawu ezicacile yokukhulelwa is hhayi waphawula. Esikhathini kusuka 1 kuya ku-3 ngesonto umbungu enamathiselwe odongeni lesizalo. Qala ukwakha izitho ezibaluleke kakhulu, kukhona lamatshwayo umbungu. Ngalesi sikhathi, esiswini akuyona efiselekayo uzizwe ikati ukunquma ukuthuthukiswa izingane. Ngalesi sikhathi, ekushintsheni ukuziphatha ikati, yena ukuhlanza nesicanucanu. Lapho eqala ukuze ujike pink izingono, ongasho ngokuqiniseka ukuthi ekupheleni kwesonto lesithathu. Ngakho, kuyacaca ukuthi zingaki izinsuku uzozala ikati. Kungaba enye amasonto 6, futhi kuyomelwe izingane ubuka.
Kusukela 4 kuya 6 amasonto of izithelo ukwandisa ngobukhulu, ziye zaba like amazinyane. Kakade kukhona izimpawu zokuqala izinwele. Cat uqala ukudla okuningi, ukwanda esiswini bese uba eliphakathi kwe-okwenyanga. It akusadingeki manje ukuqagela bangaki uzozala ikati. kwesokunxele "senyanga" omunye eledlule.
Kusukela amasonto 7 kuya ku-9 amazinyane ubudala akhiwa ngokugcwele futhi linoboya, manje bona kuphela zikhule, ikhula ngesisindo. kitten obuphelele at lokuzalwa 8 cm, futhi enesisindo cishe 100 amagremu manje izingane ukukhuthalele ezihambayo. Kuwukuziphulula esiswini, ungaziqhenya amakhanda abo. Kodwa cindezela kakhulu ngeke bakwazi, ngoba ungakwazi ukulimaza ingane. Manje izingono cat sika zigcwala livela colostrum futhi osenyameni ecacile esithweni sangasese.
Ukushintsha ukuziphatha amakati ngesikhathi sokukhulelwa
Manje uyazi ukuthi zingaki izinyanga uzozala amakati, futhi ngaleyo ndlela akwazi ukulungiselela lo mcimbi. I isilinganiselo lokuzalwa wathi ukuziphatha isilwane sakho. Kuba evilaphayo kakhudlwana futhi yokwenziwa, ilahlekelwa lobubhalo yayo yangaphambili. Mayelana 8 amasonto cat kunzima ukuze sifinyelele bese ugibela etulu kwezihloko eliphakeme, kungaba yephuka kalula futhi bawe. Ibonisa iphango emangalisayo, kodwa ezinsukwini zokugcina ngaphambi kokuzalwa ungakwazi senqabe ukudla. Musa ukuphoqa ke, ngemva kokubeletha esesuthi uyabuya.
amalungiselelo Kugcine phezu, futhi manje ikati sika amanzi waphula. Bangaki uzozala - umbuzo manje iba semqoka. Beka isandla sakho esiswini sakhe. Uyozizwa Kufinyeta, ungakwazi ukuphulula ke, kuyokusiza uphumule. Ngemva imizuzu lengu-20 dilatation wesibeletho ifinyelela esiphezulu, futhi ukukhanya kuyoba kitten kuqala. Uma isinye fetus ihleli, kuyobe sekudingeka ukwenze lokho ukuwuchitha ngobumnene, bese ukunikeza cat ithuba ukhotha ngomntanakhe. Uneziqu isikhathi sokuphumula futhi sithole amandla, ngoba akusho ukuthi ukukhanya zizovela uma wonke amazinyane uma amanzi cat aphula. Bangaki abayohlala uzozala yesibili - incike izici bokuphila, ngokuvamile nalesikhathi kuyinto amahora ama-4, nakuba, ngezinye izikhathi, kittens bazalwa enye ngemva kwenye.
Ngokuvamile abelethe kalula, kanti ikati ayidingi usizo. Ziyakwazi omama ezinhle, futhi kakhulu kuyaqabukela senqatshelwa izingane. Kunalokho, i-cat iyofana ngokuzithandela yomunye lekati, puppy, noma ngisho rat, uma zisetshenziselwa nomunye kusukela ebuntwaneni. Kodwa ngaso sonke isikhathi niqaphe. Uma udinga usizo lochwepheshe, kufanele inikezwe ngokushesha, noma kungenzeka lihuduleke hhayi kuphela ezimpilweni zezingane, kodwa futhi konina. Njengoba sekunama-umndeni ubuka impi kukhona omunye ukukhathazeka: ukuthola zonke izingane ikhaya elihle elisha.
Estrus e amakati, indlela yekubona ukuthi yenzeni
Njengoba amajuba mate, zohlobo
"The Mask" movie: lokho zohlobo inja? inja zohlobo "Buso"
Indlela amanzi okugqumisa ginger? Ukupheka zokupheka kanye nezincomo ukhiye
Ukuqhathanisa amathangi World of Tanks - okuyinto ithangi kungcono ukukhetha?
U-Godric Gryffindor: Indaba Ye-Character
Yini ngempela kwenzekani uma ungenayo ugeze off ukwakheka ngaphambi kokulala: nemiphumela 17 ezingezinhle
Ukufundisa umculo wezingane kusiza ukuthuthukisa ukuxhumana okusha ebuchosheni